Archive du 20171212
Aferana vary simba tao Toamasina Misy ifandraisany amin’ny Silamo mpampihorohoro ?
Anio no hiakatra eo anivon’ny tonia mpampanoa lalàna Toamasina ireo teratany Pakistanais telo lahy tratra tamin’ilay resaka vary lo sy efa simba.
Véronique Vouland-Aneini “Manantena fifidianana ao anatin’ny fitoniana i Frantsa”
Nanamafy omaly teny Andrefanambohijanahary Rtoa Véronique Vouland-Aneini fa manantena ny hisian’ny fifidianana ao anatin’ny fitoniana eto Madagasikara i Frantsa, fitoniana izay hahafahan’ny firenena mandroso.
Vonona tanteraka ny TIM Ravalomanana no filoha amin’ny 2018
Nakotroka ny fihaonamben'ny ben’ny tanàna avy amin'ny antoko Tiako i Madagasikara na ny TIM sy ny rafitra eo anivon'ny antoko omaly teny amin'ny FOFIKRI Ankadikely Ilafy.
Depiote Jean Nicolas Betroka Manampahaizana fa tsy ampy fahendrena i Paolo
Namita iraka nampanaovin’i Voahangy Rajaonarimampianina nizara fanampiana ho an’ny mahantra tany Beraketa kaominin’i Soanala distrikan’i Betroka no antony tsy nitenenako taorian’ireny fanaratsiana ahy nataon-dRaholinarivo Paolo mpanolotsain’ny praiminisitra Mahafaly Olivier teto Antananarivo ireny.
Tsy mbola menatra foana ve ?
Miarahaba ry Jean a ! Arahabaina aloha ianareo tratry ny tsingerin-taonan’ny nanangananareo ilay Repoblikan’ny fandrosoana sy ny fivoarana, izay feno 7 taona katroka omaly e !
Fitokonan’ny mpitatitra entana sy ny “transitaires” Namono afo i Beboarimisa Ralava
Nampikoropaka ny fitondram-panjakana ny fanapahana noraisin’ireo mpitatitra entana sy ireo Transitaires tao Toamasina, amin’ny anaovan’izy ireo fitokonana tsy voafetra nanomboka omaly ho fangatahan’izy ireo ny fihainoan’ny fanjakana ny olana mianjady amin’izy ireo ataon’ny MICTSL,
Fanazavana ny fampiakarana vidin-jiro Mifanilika ny tompon’andraikitra
Mifanilika tsy misy mety hanazava ny anton’ny fisondrotan’ny vidin-jiro ho an’ireo antsoina hoe “Gros clients”, dia ireo orinasa vaventy sy ny fomba hampiharana azy ny avy eo anivon’ny orinasa Jirama.
Faha-68 taonan’i Marc Ravalomanana Hira fiderana no nisantarana azy teny Faravohitra
Nosantarina halina tamin’ny alalana rindran-kira fiderana ny fankalazana ny tsingerintaona faha-68 nahaterahan’i Marc Ravalomanana.
Mamy Ravatomanga Mananontanona ny fisamborana…
Herinandro katroka anio talata no nivoahan’ny didy tsy fahafahana mivoaka ny firenena na IST ho an’ilay mpandraharaha Malagasy Mamy Ravatomanga,
Adin-dRalitera A sy ny AV7 Amin’ny 28 desambra ny didim-pitsarana
Tontosa omaly alatsinainy 11 desambra ny fitsarana ny fitoriana nataon-dRalitera Andrianandraina tamin'ny nigiazan'ny fanjakana ny kaonty tahiriny any amin’ny banky noho ny antony hanonerana ny onitra 639 tapitrisa ariary amin’ny fikambanana AV 7.
Itaosy Cité Sprinter 2 may kila forehitra
Fiara marika Sprinter roa no nirehitra teny amin’ny Parking eny amin'ny "Cité des assureurs" Itaosy omaly maraina.
Ankatoky ny fety 3.500 ireo ankizy notoloran’ny vadin’ny filoha fanomezana
Ankizy marary sy sahirana ara-pivelomana miisa 230 isa omaly, no notoloran-drtoa Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny filoham-pirenena, fanomezana, amin’izao ankatoky ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao.
Morondava May kila forehitra ny SOPEMO
May kila forehitra ny orinasa SOPEMO (Societe de Pêcherie de Morondava) mpanodina hazan-dranomasina ao Morondava omaly. Raha ny fampitam-baovao vonjimaika avy any an-toerana, dia fifampikasohan’ny herinaratra na “court circuit” tao amina “vestiaire” iray no niantombohan’ny afo, ka nampirehitra ny orinasa manontolo.
Mpianatra eny Ankatso Manambana hitokona indray
Nanambana hitokona indray ny mpianatr’Ankatso omaly. Toy ny mahazatra dia ny olana eo amin’ny vatsim-pianarana hatrany no antony.
Fahatongavan’ireo vary nohafarana Matahotra ho matiantoka ny mpamongady
Nahitana fidinana 50 ariary monja ny vidin’ny vary makalioka, raha ny hita teny amin’ny tsenan’Anosibe omaly. 2200 ariary teo aloha ary efa tafidina 2150 ariary.
FTHM Consulting Fahombiazana no azony tamin’ny fampiroboroboana ny orinasa
Tontosa soa aman-tsara omaly teny amin’ny Ibis Ankorondrano ny fanolorana ilay certification ISO 9001-2015 ho an’ny FTHM Consulting, orinasa iray mpanolotsaina amin’ny fitantanana ny orinasa eto an-toerana sy any ivelany.
Fety faran’ny taona Mahasarika ny olona ireo kojakoja elektronika
Amin'ny vaninandro fety toy izao dia ny karazana kojakoja elektronika na «éléctromenager» no mahasarika ny olona.
Sambaina Manjakandriana Hisy orinasa maro hatsangana, hanampiana ny tanora
Orinasa maro sy lehibe no hatsangana eo anivon’ny kaominina ambanivohitra Sambaina, distrikan’i Manjakandriana ato ho ato entina hanomezana asa ny tanora, hoy Randrianasolo Iandry Balsama, lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna ao an-toerana.
Fampitaovana ny zandarimaria Manampy hatrany ny Frantsay
Natolotra teny amin’ny Toby Ratsimandrava Andrefanambohijanahary omaly ireo fitaovana hoenti-mampianatra an’ny sekolim-pirenena
Ambatondrazaka Rakotra asan-jiolahy ny tanàna
Rakotry ny fanafihan-jiolahy ny tanànan’Ambatondrazaka ny faran’ny herinandro teo.
Fiara kamio lehibe iray no nahitsaka mpivady lehibe niaraka tamin’ny bisikileta omaly tany amin’ny kaominina Ambohitrandriamanitra any amin’ny distrikan’i Manjakandriana.
New York – Etazonia Nisy baomba nipoaka
3 no naratra ary efa voasambotra ilay lehilahy ahiana no tompon’antoka tamin’ny fanapoahana baomba tao afovoan-tanànan’i New York omaly.